Madaxwaynaha Somalia oo la kulmay Suldaanka cusub ee Cumaan oo uu tacsi gaarsiiyey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Madaxwaynaha Somalia oo la kulmay Suldaanka cusub ee Cumaan oo uu tacsi...
Madaxwaynaha Somalia oo la kulmay Suldaanka cusub ee Cumaan oo uu tacsi gaarsiiyey + Sawirro
(Masqat) 14 Jan 2020 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka soo laabtay dalka Cumaan oo uu kaga qeyb galay tacsida Suldaan Qaabuus Binu Siciid.
”Madaxweynaha oo Suldaanka cusub ee Cumaan Haysam Bin Daariq kula kulmay Qasriga Saldanada dalkaas ayaa la wadaagay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay la qaybsanayaan murugada geerida Suldaan Qaabuus oo kaalin ka qaatay gurmadka shacabkeenna wakhtiyadii adkaa.” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Madaxtooyada Qaranka.
”Madaxweyne Farmaajo ayaa u rajeeyey Suldaanka cusub ee dalkaas Suldaan Haysam Binu Daariq in uu sii amba-qaado dhaxalkii horumarineed ee uu ka tagay Suldaanka geeriyooday, isagoona sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka go’an tahay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee kala dhexeeya walaalahooda dalka Cumaan.
”Dhankiisa, Suldaan Haysam Bin Daariq ayaa uga mahadceliyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga Dowladda Federaalka Soomaaliya ka soo qayb-galka tacsidan iyo in maalmahan murugada leh ay garab istaageen shacabka iyo dowladda Cuma an.” ayuu u dhignaa warka kasoo baxay Villa Somalia.
Previous articleTurkiga oo fikrad looga faa’iidaysan karo u keenay geela lagu laynayo Australia
Next articleAabayaasha gabdhaha badan oo ka cimri dheer kuwa wiilasha badan (Daraasado is burrinaya)